Jett Klyne – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Boy (2016) Unicode ဂရီတာအီဗန်စ် ဟာ အမေရိကန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကလေးထိန်းအလုပ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ရွာငယ်လေးတစ်ရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာသူပါ. သူမအလုပ်လုပ်ရမဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမတွေ့လိုက်ရတာက ထူးဆန်းတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရယ် သူမထိန်းရမှာ ကလေးတစ်ယောက်လို့ထင်ပေမဲ့ တကယ့်ကလေးမဟုတ်ပဲ ကလေးငယ်လေးအတိုင်းပုံတူလုပ်ထားတဲ့အရုပ်လေးတစ်ရှပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက်မှာသူမ ကို အိမ်ကြီးရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ သူမကို စည်းကမ်းပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ အတူအရုပ်ကလေးကိုပါထားခဲ့ကာ ခရီးရှည်ထွက်သွားကြပါတော့တယ်. အဲ့ဒီနောက် ဂရီတာ တစ်ယောက် ဘရန်ဟ် ဆိုတဲ့ကလေးရုပ်လေးနဲ့အတူအိမ်ကြီးထဲမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား. အိမ်ကြီးကိုရောက်ပြီးမှ ရင်းနှီးသိကျွမ်းခဲ့တဲ့ မယ်ကွန်လ် ဆိုတဲ့ သူကရော သူမ ယုံကြည်ရသူဖြစ်နိုင်ပါ့မလား. သူမရဲ့ နောက်ကြောင်းကအတိတ်ဆိုးကရော ဘယ်လိုလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ အိမ်ကြီးရှင်လင်မယားကရော ပြန်လာမှာလား အဲ့ဒီလိုလျှို့ဝှက်သည်းဖို ဖြစ်ရပ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်ရင် ဒီ ဇာတ်ကားလေးကိုသာဒေါင်းလုတ်ဆွဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့ လို့တိုက်တွန်းပါရစေ Credit Review Zawgyi ဂရီတာအီဗန္စ္ ဟာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ကေလးထိန္းအလုပ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္႐ြာငယ္ေလးတစ္႐ြာကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူပါ. သူမအလုပ္လုပ္ရမဲ့အိမ္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့သူမေတြ႕လိုက္ရတာက ထူးဆန္းတဲ့လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရယ္ သူမထိန္းရမွာ ကေလးတစ္ေယာက္လို႔ထင္ေပမဲ့ တကယ့္ကေလးမဟုတ္ပဲ ကေလးငယ္ေလးအတိုင္းပုံတူလုပ္ထားတဲ့အ႐ုပ္ေလးတစ္ရွပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္. အဲ့ဒီေနာက္မွာသူမ ကို အိမ္ႀကီးရွင္လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဟာ သူမကို စည္းကမ္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ အတူအ႐ုပ္ကေလးကိုပါထားခဲ့ကာ ခရီးရွည္ထြက္သြားၾကပါေတာ့တယ္. အဲ့ဒီေနာက္ ဂရီတာ တစ္ေယာက္ ဘရန္ဟ္ ဆိုတဲ့ကေလး႐ုပ္ေလးနဲ႔အတူအိမ္ႀကီးထဲမွာအဆင္ေျပႏိုင္ပါ့မလား. အိမ္ႀကီးကိုေရာက္ၿပီးမွ ရင္းႏွီးသိကြၽမ္းခဲ့တဲ့ မယ္ကြန္လ္ ဆိုတဲ့ သူကေရာ ...
IMDB: 6.0/10 67,106 votes